काठमाडौंमा आज कांग्रेसको नगर अधिवेशन हुँदै, महानगरमा को-को गर्दैछन प्रस्तिस्पर्धा ? — Sanchar Kendra
काठमाडौंमा आज कांग्रेसको नगर अधिवेशन हुँदै, महानगरमा को-को गर्दैछन प्रस्तिस्पर्धा ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत शनिबार काठमाडौंमा नगरअधिवेशन हुँदैछ । एक महानगर र १० नगरपालिका रहेको काठमाडौंमा आज अधिवेशन हुने भएको हो । दक्षिणकाली नगरपालिकाबाहेक सबै नगरमा अधिवेशन हुने कांग्रेसले जनाएको छ । दक्षिणकाली नगरपालिकाको एक वडामा अधिवेशन नभएकाले त्यहाँ अर्काे मितिमा नगरअधिवेशन हुने कांग्रेसको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
बुढानीलकण्ठमा तीन उम्मेदवार
गगन थापाको निर्वाचन क्षेत्र हो, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका । यो नगरको ५ वटा वडा प्रतिनिधिभा निर्वाचन क्षेत्र–५ मा पर्छन् । नगर सभापतिका लागि तीन आकांक्षी छन्, राजाराम बुढाथोकी, राजन बुढाथोकी र राजुविक्रम थापा ।
राजाराम साविकको कपन गाउँ विकास समितिका सभापति हुन् । उनी सिंह–थापा समूहका नेता हुन् । अर्का उम्मेदवार राजन बुढाथोकी नगर सचिव हुन् । उनी पेशाले अधिवक्ता हुन् । राजुविक्रम थापा नेपाल तरुण दलका नगर सभापति हुन् । राजन र राजविक्रम दुवै संस्थापन समूह निकट हुन् ।
दक्षिणकालीमा मोहन बस्नेतकै सम्भावना
दक्षिणकाली नगरपालिकामा भने सहमतिबाटै नेतृत्व चयन हुने सम्भावना रहेको नेताहरु बताउँछन् । नगर सभापतिमा मेयर मोहन बस्नेतको मात्रै दाबी देखिएको छ । उनी प्रकाशमान सिंह निकट हुन् । संस्थापन समूहले श्याम कार्कीलाई उम्मेदवार बनाउन खोजेपनि उनले बस्नेतलाई समर्थन गरेका छन् ।
यद्यपि वडा नम्बर २ को अधिवेशन हुन लागेकाले भोलि नै नगर अधिवेशन हुने सम्भावना कम देखिएको छ । नेतृत्वमा सहमति नजुट्दा नगरको वडा नम्बर २ मा अधिवेशन हुन सकेको छैन ।